Umthandazo wokuThengisa iNdlu. ? USanta Joseph kunye noPai kaThixo
Umthandazo wokuthengisa indlu. Ukuthathela ingqalelo umthandazo kuzo zonke izicelo nezenzo ezenziwa kuthi imihla ngemihla kubaluleke kakhulu. Ke ukuba sifuna enye ukuthandazela ukuthengisa indlu Kufuneka sazi ukuba sikhangele njani isivakalisi esichanekileyo.
Kukho imithandazo ngayo yonke into esiyifunayo kwaye siyithengisa indlu, ngaphandle kwamathandabuzo, yinkqubo apho sifuna khona isikhokelo sombuso ophakamileyo osikhokelela ekwenzeni izigqibo ezilungileyo kuba akufuneki zithathwe lula.
Ngomthandazo siya kufumana uxolo nobulumko, kanye le nto siyifunayo ukuze senze isenzo esihle.
1 Ngaba umthandazo wokuthengisa indlu uqinile?
1.1 Umthandazo kuSan José wokuthengisa indlu
1.2 Umthandazo wokuthengisa indlu ethengiswe kakuhle
2 Ndingazithetha zombini ezi zivakalisi?
Ngaba umthandazo wokuthengisa indlu uqinile?
Umthandazo unamandla, Nokuba ukwenze phi na okanye umzuzu, umthandazo uya kuhlala ungoyena sisixhobo sethu kunye nesixhobo esiya kusinceda ukuba sifumane iindlela kwanaimeko apho sicinga ukuba azikho.
Kwaye ngokuchanekileyo kwezi meko zinzima kakhulu apho umthandazo unamandla kakhulu.
Ukuthengiswa kwendlu kunokuba nobunzima obuthile, amaxesha amaninzi kuyadingeka ukuba kuthengiswe ngokukhawuleza kwaye kuya kuba ngumtsalane ukufumana umntu onomdla wokwenene ofuna ukuthenga le ndawo, kwezi meko akukho nto ingcono kunokuba umthandazo ukwazi ukuthengisa ngexesha lokurekhoda.
Akukho nto ingenakuphunyezwa ngumthandazo kwaye oku kuyinyani ngokupheleleyo.
Ukuba, endaweni yoko, into efunekayo kukuyithengisa kumntu obonelela ngononophelo ebengasinika lona, ​​kuba indlu ngokwayo inexabiso elikhulu lemvakalelo, ke ukukhangela umthengi kuya kuba nzima nangakumbi.
Umthandazo inokwenza ukuba umthengi ebesilindele avele, ehambelana nexabiso kwaye enika indlu inkathalo kunye noxabiso oluyimfuneko ukuthintela ukonakala kwayo.
Ukubeka lonke ukholo kumandla omthandazo kuya kusinika amandla ayimfuneko okulinda ummangaliso esiwudingayo.
Umthandazo kuSan José wokuthengisa indlu
Owu, uYosefu oMangalisayo, Wena owawufundiswe yiNkosi umsebenzi wekhabhathi, Kwaye kwaqinisekiswa ukuba ubekwe ngonaphakade, Yiva ibango lam ngovuyo.
Ndifuna ukuba undincede ngoku Indlela owamnceda ngayo unyana wakho okhulelweyo nguYesu, Kwaye njengawe ngenkcubeko kunye nezakhono zakho Uncede abanye abaninzi kwizindlu. Ndinqwenela ukuthengisa oku (indlu enegama okanye ipropathi) ngendlela ekhawulezayo, elula neluncedo.
Kwaye ndiyakucela ukuba wenze umnqweno wam Ukusondela kumthengi olungileyo, Ozimiseleyo, owenza kwaye ofanelekileyo, Kwaye uyandamkela ukuba akukho nto iyayekisa ukugqiba ukuthengisa ngokukhawuleza.
Othandekayo oNgcwele uJoseph, ndiyazi ukuba uza kundenzela le nto ngenceba yentliziyo yakho, kwaye usebenze ngexesha elipheleleyo, kodwa ubunzima endikubo bukhulu kakhulu ngoku kwaye kufuneka benziwe ngokukhawuleza.
UJoseph oNgcwele, ndiza kuzifaka kwimeko enzima Intloko yam ihleli ebumnyameni kwaye ndiya kunyamezelana nokunyamezelwa kweNkosi yethu, Kude kube oku (indlu okanye impahla ithathelwe indawo) yinto engekhoyo.
Siyakucela ukuba ukhokele abathengi abafunekayo, ukuze sikwazi ukuqhuba ngokwentengiselwano elungileyo kuwo omabini amaqela, kwaye ngokukhawuleza.
Ke uYosefu oyiNgcwele, ndiwubeka phambi kweNkosi yethu enkulu ukuba uya kubutha umbulelo ongapheliyo Kum, ndithwele igama lakho ezithambileyo kwimilebe yam apho ndiya khona.
I-San José yeyona Ngcwele ekufuneka siye kuyo kwezi meko kuba yena, njengombazi, ulazi ixabiso elinokubakho kuzo izindlu nomhlaba.
Ukuthetha naye kunokusinceda sifumane isisombululo ebesikulindile, khumbula ukuba umthandazo unamandla kwaye, ukongeza, sikwenza ngokulunga kuba unamandla ngakumbi.
Asinakho ukuya nakuphi na ukukholelwa ukukholelwa amandla okanye ukusebenza kwabo kodwa, endaweni yoko, kufuneka sithembele kwaye sikholelwe ukuba nganye kuzo ingasinceda ukuba sifumane isisombululo kuyo nganye inkxalabo yethu.
La umthandazo kuSanta Joseph Ukuthengisa indlu kuyasebenza kwaye kungummangaliso.
Umthandazo wokuthengisa indlu ethengiswe kakuhle
Bawo Thixo, enkosi ngokundisikelela ngalelikhaya. Enkosi ngolonwabo endilufumene kuye kule minyaka bendihlala apha. Ndibonise into endifuna ukuyenza ukuyilungiselela ukuthengisa.
Ndithandazela ukuba indlu yam ithengise ngokukhawuleza. Andizukubakho uloyiko entliziyweni yam kuba ndiyazi ukuba unayo umthengi ofanelekileyo emgceni wokuyithenga.
Ndicela undinike ubabalo lokunyaniseka kwaye ndingabinamali kule nto ndiyicelayo.
Ndiyazi ukuba ndifuna umthengi kwaye ndicela uyithumele ngokukhawuleza. Ndiyakuthembisa ndikunike ngokonyuka oza kuzisa kolu shishino kwaye ndikunike imbeko kolu shishino.
Ndithandazela nendawo entsha apho uya kundithatha khona.
Ngamana ungangilungisa ukuze ndifumane uvuyo noxolo olukhulu kweli khaya litsha, eGameni likaYesu, uthando.
Umthandazo wokufumana isivumelwano esihle xa kuthengiswa indlu kufuneka uqukuqelele ngokucocekileyo nangokuchanekileyo ukusuka kwindawo yethu yangaphakathi ukuya kwingcwele eya kubhekiswa kuyo.
Kungenxa yoko kuyacetyiswa ukwenza ukucocwa kwendlu nangokomoya kwendlu esifuna ukuyithengisa ngenjongo yokususa yonke into embi ethintela ukufumana isivumelwano esihle kuthengiso.
Ndingazithetha zombini ezi zivakalisi?
Abantu abaninzi boyika ukuthandaza ngaphezu komthandazo. Kule meko ungakhathazeki.
Ndiyakwazi kwaye kufuneka sithandaze sobabini imithandazo ngaphandle kwengxaki.
Nawuphi na umthandazo wokuthengisa indlu uqinile kwaye kufuneka uthandaze amaxesha ngamaxesha njengoko unqwenela.
Into ebalulekileyo kukuba uyakholelwa kuThixo naseSan José.
Kungale ndlela kuphela apho aba bangcwele babini banokukunceda ngesisa sakho.